Fahatakarana ny lalàna momba ny varotra: ho an'iza ary ho an'iza | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny lalàna mifehy varotra dia lalàna ho an'ireo orinasa izay misy ny fihenan-kery ara-dalàna amin'ny fifampiraharahana ary mandrakotra ny varotra varotra rehetra. Tena zava-dehibe amin'ny orinasa sy ny olona izay manao raharaham-barotra isan'andro. Ny fanampian'ny orinasan-dalàna ara-barotra dia miantoka ny fanarahana ny lalàna mifandraika amin'ny fifanakalozana ara-barotra sy ny varotra orinasa, izay miteraka ny fifampiraharahana ara-drariny sy marina.
Ny lalàna ara-barotra dia miavaka noho ny fahamarinana hoe mifehy ny endriny samy hafa ao amin'ny orinasa. Ny lalàna mifehy ny fifanarahana dia toerana iray arain'ny lalàna ara-barotra, izay manandrana antoka fa ny fifanarahana fifanekena dia ara-drariny sy mitombina amin'ny antoko rehetra voakasik'ilay fomba fiasa. Ny lalàna ara-dalàna koa dia mandray anjara amin'ny fiantohana fa ny fifanekena izay ara-dalàna dia tsy hanohitra ny lalàna mifehy ny heloka bevava na ny sivily ankehitriny.
Ny entan'ny mpanjifa dia toerana manan-danja iray hafa izay fehezin'ny lalàn'ny asa aman-draharaha, izay manampy anao hahazo antoka fa ny mpanamboatra ny mpanjifa ny vokatra ary koa ny vokatra dia voaro amin'ny alàlan'ny famokarana avy amin'ireo fahavoazana antenaina na amin'ny fampiasana ireo vokatra ireo. Raha tsy misy fomba fanao ara-drariny sy ara-drariny hanakaramana izay ampiharina amin'ny lalàna ara-dalàna izay ara-barotra, ireo olona ambony manana toerana ambony amin'ny toerana dia mety tsy hokaramaina amin'ny asa nahafa-po azy ireo. Ny fampiharana fampiasa tsy ara-drariny dia mihena be amin'ny alàlan'ny fampiharana sy ny fampidirana ny lalàna ara-barotra, izay nanampy ny maro rehefa nitady asa, mba hisorohana ny fanavakavaham-bolonkoditra ary koa ny fandrika fanavakavahana hafa.
Ny fanamarihana ara-dalàna natao tao anatin'ny faritra ara-barotra izay ara-dalàna dia mametraka fitsipika ary ny lalàna mifehy ny fomba fifampiraharahana eo amin'ny raharaham-barotra, ny olona ary ny fikambanana hafa. Izy io dia manolotra rafitra iray ahafahanao mifehy ireo fomba fahazoana mifamaly, ahafahanao mahazo antoka fa ny fomba fanao dia misy fomba mitovy sy mitombina, ary miteraka fifanarahana orinasa tsara ifandraisany amin'ireo antoko tafiditra izany.
Raha manana fanontaniana lehibe ianao dia, avy eo makazao amin'ny orinasam-pitsaboana izay manampy ny olona rehetra liana amin'ny orinasa.
Maninona no ilaina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny orinasa mifehy ny varotra?
Ho an'ny tompona orinasa rehetra dia ilaina ny miara-miasa amin'ny orinasan-dalàna momba ny asa mba hahazoana antony maro samihafa; mifehy ny orinasa sy ny varotra izany. Ilaina indrindra ity lalàna ity ho an'ireo izay miatrika fivarotana matetika. Hetsika iray hafa fehezin'ity lalàna ity ny entan'ny mpanjifa, ny varotra, ny fifanarahana orinasa ary ny fampiarana.
Ny orinasa iray na tompon'orinasa orinasa dia hahazo ny fanampian'ny orinasa mpanao varotra amin'ny raharaham-barotra fa tsy manandrana manao fizahana manokana. Ary koa, tonga amin'ny fandefasana mpivarotra, volavolan-tserasera fiaraha-miasa sy fifanakalozana. Izany koa dia hanitatra ny fahafaha-manao raharaham-barotra amin'ny fomba ara-dalàna.
Rahoviana Ianao no mila filana lalàna ara-barotra?
Na inona na inona karazana orinasa misy anao afaka tonga fotoana iray rehefa manana ny fangatahana ianao serivisy fanabeazana matihanina orinasa mpivarotra. Ny antony mahatonga an'io dia maro; vitsivitsy amin'ireo izay manan-danja no ho voarakitra eto. Ny marina dia raha mitombo haingana be ny orinasanao amin'ny fotoana sasany dia mila mpisolovava ianao izay hanampy anao hamakivaky ny ala mikitroka sy ny zava-misy fa miaina ao anaty fiarahamonina litigrie isika izao. Ny lalànan'ny asa aman-draharaha dia manana fahaizana manampy orinasa iray hamela anao amin'ny fotoanan'ny krizy ara-dalàna sy hiaro ny fananany. Rehefa mijery vaovao momba ny orinasa ianao dia hitanao fa ny lohateny lehibe dia momba ny hetsika ara-dalàna, amin'ny fomba fanao raharaham-barotra, mila arovanao amin'ny alàlan'ny fanakaramana solontena iray ianao.
Betsaka ny olona no aleony miandry mandra-pisehoan'ny tarehin-javatra iray fanampiana avy amin'ireo orinasam-panjakana ambony. Tsy ilaina intsony ny milaza izany, ity dia mety ho toerana tsy azo ekena ho an'ny olona iray izay niasa mafy hampitombo ny orinasany. Hahita ohatra maro amin'ny zava-mitranga ianao eo amin'ny tontolon'ny varotra izao.
Ny orinasa iray amin'izao fotoana izao dia mahita ny tenany fa mizara tsiambaratelo momba ny doka. Tafiditra amina orinasa iray izay manomboka manao teknika na dokambarotra manokana.
Tsy noho ny fahalasan'ny mpiasa ihany ny antony maha zava-dehibe ny fiasan'ny orinasan-dalàna ara-barotra ho anao. Ity tranga ity dia antsoina hoe fandaharana fifanarahana. Raha miasa orinasa mila manome fifanarahana ianao, dia mila mpisolovava handinika ny fifanarahana ary hiantoka ny fiarovana ny tombotsoan'ny orinasanao. Raha toa ka mari-pamantarana marika na patanty misy fanampiana ara-dalàna izy ireo dia mety irina koa.
Mikasika ny fanangonana faktiora, betsaka ny olona tsy mahatakatra ny zony. Mety ho hitanao fa iharan'ny herisetra ataon'ny mpanangona vola ianao raha miasa orinasa. Rehefa miatrika ireo mpanangona volavolan-dalàna dia ilaina ny mahatakatra izay mety ho tanterahina mba hahafahan'ny orinasanao mandeha tsara.
Miaraka amin'ny fanampian'ny orinasa ara-barotra ara-barotra dia tsy ho vita ny hanandrana fahafaham-po amin'ny fahafaham-po amin'ny fiatrehana raharaha toa izany.